Home Wararka Duqa Muqdisho oo aan Weli Garan Mas’uliyaddiisa Kuna nool Waayihii Hogaamiye Kooxeedyada
Duqa Muqdisho oo aan Weli Garan Mas’uliyaddiisa Kuna nool Waayihii Hogaamiye Kooxeedyada
Qoraalkaan Xanuunka leh waxaa qoray mid ka mid ah aqoonyahannada inta badan waxa ka qora arrimaha bulshada Yaxye Caamir, wuxuuna si qalbijab ah ugu soo bandhigayaa dhibaatada loo geysto dadka dan yarta ah ee uu gudoomiyaha u yahay Cumar Finish oo aan weli yeelan maskax ma’uuliyadeed, kuna nool waayihii uu ahaa hogaamiye kooxeedka ee dadka liita aan wax texgelin ah loo hayn.
Qoraalka oo dhan halkaan ka akhriso wuxuuna Yaxye ku ku qoray barta uu Facebook ku leeyahay.
Danyarta Xaqooda hala tixgalyo
Subaxdaan Dadkii Danyarta ahaa ee ku ganacsanayay Gudaha Deg. Xamar weyn meel u dhaw Xarunta Gobalka, Dadkaa oo u badnaa Haween, ayaa intii eyna soo shaqa tagin, waxaa la burburiyay Kabaradii iyo Gaarigacanadii ey ku ganacsanayeen.( F.S: 1-4aad)
Goobtu waxa ey aheeyd Waddo xiran oo gaadiidka Dadweynuhu uuna isticmaalin.
in kasta oo Maalin kasta ey Cashuurta bixiyaan, Haddana waan ogahay in Sharci darro ey ku deganyihiin Goobahaa, oo ey dani ku qasabtay, Laakin Dowlada hoose waxaa ku waajib ah in ey Tixgaliyaan Xaaladaha Dadkaa Danyarta ihi ey ku suganyihiin.
waxaan Xasuustaa mar Roob da’ay oo ey Biya galeen Xaafadda ka horeeysay Xarunta Deg. Howlwadaag Sannadihii 70 yeedii , Madaxdii Qaranka ayaa timid Dadkii waxaa si ku meel gaar ah loo dejiyay Dugsiga H/wadaag, Ardaydiina waa la fasaxay, waxaa la tixgalinayay xaaladda Dadku ku ey sugnaayeen.
ma filayo in Dadkaan Danyarta ah loo hayo Goobo ey ku ganacsadaan, waa Dad la tacaalayo Nolol Maalmeedkooda, mana jirto Baahi hadda loo qabo goobta ey ku ganacsadaan.
Codsi:Waxaan ka codsanayaa Dowlada Hoose in ey Ixtiraamto Hantida Dan yarta oo si naxariis leh loola dhaqmo Dadka, lana ilaaliyo hantidooda marka ey ka maqan yihiin, Digniina la siiyo, Goob ey ku ganacsadaana loo raadiyo, inta ka horeysana la tixgaliyo Duruufaha heysto Danyartaa Cashuurta bixso.
Dowladu waxa ey u shaqeysaa Maslaxadaa Shacabka, Duruufaha markaa jiro in ey ka saaciddo iyo sidii ey u maareey lahaayeen Dadweynuhu Nolol Maalmeedkooda.
waxaan mar kale si naxariis leh uga codsanayaa Dowladda Hoose in ey tixgaliso codsigeyga.
Waa dadkaas iyo kuwa la mid ah waxa loo rabo inay dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay oo ugu yaraan qofka ku soo baxaa lagula shaqeeyo 2021, laakiin haddii dhibaata dhacdo oo aan doorashada la wada aqbalin waxaa ka iman kara gacan ka hadal sida dalal badan oo ay Kenya ka mid tahay ama Mareykanka oo ay hadda ka taagan tahay walow hakaas ka jiro nidaam adag .
Inkastoo maanta la sheegay in dib loogu ogolaaday inay goohaas ku ganacsadaan haddana waxaa joogto ah tacadiyada loo geysto. Haddii ay sidaas dhacdana waa dadkaan kuwa uu dhibka ugu badan uu soo gaarayo. Muqdisho online waxay codkeeda ku biirineysaa aqoonyahanka oo waxay leedahay ha loo naxo, hana loo turo dan yarta waxaa iman doona maalin dhow iyo mid oo lagu xisaabin doono mas’uul kastaa wixii uu falo oo xumaan iyo samaan ah.